မြန်မာ့စပါးအုံး ရှုံးပွဲထပ်ကြုံ၊ ရွှေခါးပတ် စွှန့်လွှတ်လိုက်ရ - BBC News မြန်မာ
244 421 มุมมอง
မြန်မာ့စပါးအုံး ရှုံးပွဲထပ်ကြုံ၊ ရွှေခါးပတ် စွှန့်လွှတ်လိုက်ရ
အောင်လအန်ဆန်ကို စိန်ခေါ်သူ ဒီရစ်ဒါ က ငါးချီ‌ယှဥ်ပြိုင်ကစားပြီး ဒိုင်သုံးဦးရဲ့ တညီတညွတ်တည်း ဆုံဖြတ်ချက်အရ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ရရှိသွားပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်ဟာ သူ့ရဲ့ ONE ချန်ပီယံရှစ် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ရွှေခါးပတ်ကော လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ရွှေခါးပတ်ကော စွန့်လွှတ်လိုက်ရပါပြီ။
ဒီလောက် Hit ရရင်ကျေနပ်ပါတယ်
Ruby Maung6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
တမင်အရှုံး​ပေးလိုက်တာ​လေ နိုင်သွားရင် မြန်မာပြည်သူ​တွေ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးဖို့ အားပေးစကား​ပြောခွင့်မရှိလို့
Myanmar Hero19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thu Ya Zawวันที่ผ่านมา
မစ်ဒယ်ဝိတ် တုန်း က ကိုဗစ်ဖြစ်ထါးတါတောင်ခပ်ပေါ့ပေ့ါအထင်သေးပြိုင်ခဲ့တော့ ဟို ကောင်ဂြိုကြွသွားတာပါ ၁နှစ် ၂နှစ်လောက်ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ
မအေဘေးကချင်သေလေ ဖင်ခံရပီ kia ကြည့်ထားပါ
Burma Buddha2 วันที่ผ่านมา
MyintOo MO2 วันที่ผ่านมา
AA BB2 วันที่ผ่านมา
Jake Jay2 วันที่ผ่านมา
Aung la.... good
OK Thaw Tar3 วันที่ผ่านมา
Nwe Lay နန္း3 วันที่ผ่านมา
kyaw naing4 วันที่ผ่านมา
maung htwe4 วันที่ผ่านมา
Min Min5 วันที่ผ่านมา
မြန်မာကိုချစ်သော မြန်မာကချစ်သော မြန်မာ့သူရဲကောင်း
snow queen5 วันที่ผ่านมา
Orchid Lay5 วันที่ผ่านมา
The. Netherlands. Men greatest well done...
moe moe5 วันที่ผ่านมา
you are ever my Icon from the bottom of my heart.
thet naing htwe5 วันที่ผ่านมา
ဟိန္းျပည့္ေအာင္း Heinpyaeaung5 วันที่ผ่านมา
လဲနေတုန်းများကန်ပါ့လား liveလွှင့်ပြီးငှက်ပျောပင်ကန်သမျိုး ကိုကအခွင့်ရေးရတော့အသုံးမချဘူး ရန်သူကိုအထင်သေးတာပါတယ် ကိုအောင်လ က မြန်မာလူမျိုးက ခွေးချင်းကိုတ်ရင်တောင် ကိုယ်အိမ်ကခွေးနိုင်မှ ဗျာ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုအောင်လကိုလေးစားပါတယ်
SKY COOLING5 วันที่ผ่านมา
အနီးကပ်ပြိုင်ဘက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားချိန်မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ.အပြောင်းအလွဲကြောင်.အမှန်တစ်ကယ်ပြိုင်ရမဲ.ပြိုင်ဘက်အတွက်ပြင်ဆင်ချိန်မရ လိုက်တာက ကံတရား ပဲလို.ပြောရမလိုပါပဲ. ကံအကျိုးပေးကောင်းလာတဲ.တစ်နေ. ပြန်လည်အောင်ပွဲရယူနိုင်၊လိမ်.မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်. One day you will be get back your prizes.
ayeaye myint6 วันที่ผ่านมา
ေနာက်ပွဲေတွအတွက်အ ေကာင်းဆံုး ြပင်ဆင်ပါ အားေပးေနမယ် စိတ်ဓာတ်ကျစရာလံုးဝမလိုဘူးေနာ် ဖိုက်တင်း
khaing maw6 วันที่ผ่านมา
wai Linn6 วันที่ผ่านมา
No Nl6 วันที่ผ่านมา
Myo Min6 วันที่ผ่านมา
Lucas channel6 วันที่ผ่านมา
Lian Dal6 วันที่ผ่านมา
အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ပါစေ Fighting ပါ မြန်မာ့သူရဲကောင်း
Kogyi Htay6 วันที่ผ่านมา
Tun ဗမာ6 วันที่ผ่านมา
Aung La 😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
Nuu Nuu2 วันที่ผ่านมา
ၿမန္မာၿပည္သားေတြကို စိတ္ညစ္ေနတာကို ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ ကိုေအာင္လ ၊ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ခ်စ္ၿပီးသားပဲ
daisy koko6 วันที่ผ่านมา
ပရိတ်သတ်မေတ္တာစူးတာလေ အာဏာစသိမ်းတုန်းက သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ အပြုအမှုတွေ ထင်မထားဘူး နောက္မှ social punishment ကြောက်လို့ အရူးကွထနင်းတာ
Gone Hla6 วันที่ผ่านมา
သံုးစားမရတဲ့အေကာင္ႏွင့္သြားမထိုးႏွင့္ကိုေအာင္လ ...ေယးအေကာင္ ေဘာေရာ ...
max blue6 วันที่ผ่านมา
ROUND (1) စက်ကန့် ၄၀ အလိုမှာ မိမိဲရဲ့ ပြိုင်ဘက်လဲကြနေတဲ့အခါ ခြေသလုံးကြွက်သာကို မိမိက ကန်ချက်ကောင်ကောင်နဲ့ ကန်ပစ်ရမှာ ဒါမှာ သူပြန်ထတဲ့ အခါ မတ်တတ်ရပ်ရင် နာနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိက သွက်လက်စွာ ကစားနှိင်မှာဖြစ်တယ် မိမိထင်မြင်ယူစချက်ကို ပြောပြတာပါ နှိင်စေခြင်လိုပါ.. စိတ်ဓါတ်မကြပါနဲ့ ဘယ်အရာမှာ ထာ၀ရ မရှိပါဘူး
nay tun7 วันที่ผ่านมา
ဒီကောင်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲမလေ့ကျင့်ခဲ့လို့ပါ ဒီကောင်ရဲ့ချုပ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရယ်ဖြည်ဖို့ရယ်ပဲလေ့ကျင့်ထားခဲ့လို့ပါ ဒီကောင်အခုလောက်ဆိုအောင်လကိုတော်တော်တော့ဖြုံ သွားပြီ ရုရှားကကောင်နဲ့ထိုးရင်ဒီကောင်ရှုံးပြီ အောင်လဆီကချုပ်ဖြည်နည်းရှရုားကောင်ရသွားပြီ တိုက်စစ်မှာမပူးမိအောင်ရှောင်ဖို့တကွက်ပဲရှာရမှာ... ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီဟော်လန်သားရဲ့ပွဲတွေကပျင်းစရာကောင်းတယ် ဘာရသမှမပေးဘူး ဂျူဂျစ်စု တကွက်ပဲသီးသန့် ၅ ချီသာပြည့်သွားတယ် သူချုပ်တာကိုဖြည်နေရတာနဲ့အချိန်ကုန်တာ.. ဆိုင်မထိုးရဲဘူးခွါလဲမထိုးရဲဘူး... ခြေတန် လက်တန်ရှည်သလောက်...
နာရန်ဒရာဗီ ျေး7 วันที่ผ่านมา
That is Okay, Nsang everything is connected, when London's political is bad, shaking to Washington DC. I want you to skip this fight days ago. You did good. That's notacombatants Just fighting in the rules, If that was street fight, he will not walk again from here. My last message was, time to make money! Don't ever make upsetting. Even you can say I lost you simply, or you won me. Even you can say " to one championship " you will not returning! I am Done for it. But to collect Retirement with your personal attorneys. However you will still practice to fight for Money. Goodnight AungHla Nsang. I Will explain all Burmese fans of you. We will fight for Money now! Also known Scams. Than [ Tan ] Law office worker. New York .USA
Tan Lain7 วันที่ผ่านมา
အောင်လကရူံးသွားပေမဲ့အရမ်းကိုအရည်အချဂ်းပြည့်ဝတဲ့မြန်မာပြည်အတွက်စံထိုက်တဲ့ champion. ကောင်းတယောက်ပါ.
thaw lay7 วันที่ผ่านมา
Kwee Hein7 วันที่ผ่านมา
ကို​ေအာင်လ ယုံကြည့်စွာဖြစ်အားပေးနေဆဲပါ တနေ့ကိုအလှည်ပြန်ယောက်လာလေ့မယ်
ေရႊထုပ္ကယ္ ဗုဒၶ7 วันที่ผ่านมา
တဖက္ က ႏိူင္သာ ႏိူင္သြား ေပမဲ့ ေအာင္ လ ေလာက္ သက္လံု မေကာင္းရွာဘူးဘဲ ။ God bless you ေအာင္လ.
Naw Win7 วันที่ผ่านมา
You haveagreater mission on your mind, people understand. It was justasport.
Yarzar Thingyan7 วันที่ผ่านมา
KO KO7 วันที่ผ่านมา
ဒီရစ္ဒါက ခ်ဴပ္ကြက္ က်ြမ္းတာ ပြဲစကတည္းခ်ဴပ္ဘဲခ်ဴပ္ေနတာ
Night Dragon7 วันที่ผ่านมา
La Yake Aye7 วันที่ผ่านมา
အသက်က စကားပြောပြီလား ကိုအောင်လရာ
Jit Lay7 วันที่ผ่านมา
You are always hero for Myanmar citizens 👍🙋🇲🇲🙏one day you will certainly be the winner 🏆.
Thazin Lal7 วันที่ผ่านมา
Myo Thant7 วันที่ผ่านมา
Lee bal sout ah
Thein Htike7 วันที่ผ่านมา
super me7 วันที่ผ่านมา
Aung La is good.
saw Oo7 วันที่ผ่านมา
မနက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိနေသေးသမျှ ကြိုးစားလို့ရသေးတယ် ကိုအောင်လအန်ဆန်
Cin Dal7 วันที่ผ่านมา
love you Aung la N Sang+++++++++
Zawmin Zawminhtay7 วันที่ผ่านมา
လဲချလို့အရှုံးရတာမှမဟုတ်ဘဲကိုအောင်လ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာမှားတက်တဲ့အမျိုးပါဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရှုံးရတာလူဆိုတာအမှာမကင်းတဲ့အရာပါ ဒိုင်တွေဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ko jine7 วันที่ผ่านมา
ေမာင္ေလး ေအာင္လရယ္ အႏိုင္မရရင္လညမး အားမငယ္ပါနဲ႔ေနာ္ အခုခ်ိန္ဟာ စိတ္ထိနာေနတဲ့အခ်ိန္မို႔ အားတင္းထား fighting Aunglah
Mawii Mawittei7 วันที่ผ่านมา
super man7 วันที่ผ่านมา
အမြဲချူပ်နေတဲကောင် ဝမ်းချူပ်ပြီးမျိူးပြုတ်ပါစေ အောင်လရေ အမြဲအားပေးနေတယ် 💪💪💪
rkar lay7 วันที่ผ่านมา
တကယ်ဆိုရင် middle weight ပဲကစားသင့်တယ်။ ဘစ်ဒစ်နဲ့ middle weightတန်းမှာ ထိုးဖို့ စီစဥ်ထားတာမဟုတ်လား။ ရက်နီးမှ ဘစ်ဒစ်က ကိုဗစ်ဖြစ်​နေလို့ ဒီရိုက်တာထိုးရမယ်ဆို​တော့ ​အောင်လအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်တာ​ပေါ့။ ​ဘစ်ဒစ်နဲ့ထိုးဖို့ training ဆင်းထားတာ။
Minn Myat7 วันที่ผ่านมา
anyway we all forever love you
Moses Ptl7 วันที่ผ่านมา
Vhh Fgh7 วันที่ผ่านมา
လူသား အပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ.💓☮✝☪🕉☸✡🔯🕎☯🆓8️⃣8️⃣8️⃣8️⃣🆓
POWER WINDOWS7 วันที่ผ่านมา
Al your my nla ft
Nang Sein3 วันที่ผ่านมา
ရွေခါးပတ် ထက် မြန်မာ အရေး ပို့ အရေးကြီး သည်..💓☮✝☪🕉☸✡🔯🕎☯🆓8️⃣8️⃣8️⃣8️⃣🆓
DC AC7 วันที่ผ่านมา
Fighting bro aung la
zoxo Pku7 วันที่ผ่านมา
RED ARAKAN7 วันที่ผ่านมา
monmon notary7 วันที่ผ่านมา
အကောင်းဆုံး ကြိုးစားထားတယ် ပြန်နိူမှာပါ ယုံကြည်တယ်
myo gyi7 วันที่ผ่านมา
Try again n' again till you W I N .
Dawkhin Mayoo7 วันที่ผ่านมา
Ma ree nar Naw Ree Nar7 วันที่ผ่านมา
Ko aung laေရ reiner ဝင္လိုက္ခိုက္ကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္
Myo Win Kyaw7 วันที่ผ่านมา
Why he so bad on ground? Smh
Octten Twentykhai7 วันที่ผ่านมา
ေအာင္လ အခြင့္အေရးနည္းသြားၿပီ စင္ေပၚကိုျပန္ၿပီးတက္လာႏိုင္ဦးမလား ...
Win Hlaing7 วันที่ผ่านมา
Bye bye aung la
Ctboy Cggirl7 วันที่ผ่านมา
Fighting brother 💪💪💪
Chan Min7 วันที่ผ่านมา
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမယ့်😢😢အားမလျှော့ပဲဆက်ကြိုစားပါ အောင်လ💪💪💪 နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်သူထမနိုင်အောင်ထိုးပေးပါ🤛🤛🤛
Myat Mon7 วันที่ผ่านมา
Aon Tai kyethi7 วันที่ผ่านมา
No Nl7 วันที่ผ่านมา
So sorry so so sorry!
Tin Wynn Myint7 วันที่ผ่านมา
Nilrwin Assk7 วันที่ผ่านมา
စိတ်မကောင်းပေမဲ့အနိုင်အရူံးကအားကစားသမားတိုင်းကြုံတွေ့ ရတာမို့အမြဲအားပေးတယ်နော် ကိုယ့်မြန်မာလူမျိါးကိုနိုင်စေချင်ပေမဲ့ ကံတရားကအဆုံးအဖြတ်ပေးနေတာမို့အားမလျော့ပါနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအတွက် ဘဲထပ်အားမွေးပါမြန်မာပြည်သူပြည် သားတွေအကုန်အစဉ်အမြဲအားပေးလျက်ပါ
Trda Pomg7 วันที่ผ่านมา
useme 4787 วันที่ผ่านมา
It’s so ok I mean low humen
Andrew Lienpi7 วันที่ผ่านมา
Ge Ge7 วันที่ผ่านมา
Kińg & Quëën7 วันที่ผ่านมา
cherry thai7 วันที่ผ่านมา
Maung Kham7 วันที่ผ่านมา
saw Tun7 วันที่ผ่านมา
အားပေးလျက်ပါ ခါးပတ် ပြန်ရနိုင်ပါစေ Ko Aung La
5 ချီ အထိကြိုးစားခဲ့တယ် Holanကောင် မထင်မှတ်ခဲ့ဘူး
zayar naing7 วันที่ผ่านมา
Ceev Scvd7 วันที่ผ่านมา
အားျမဲ အား​ေပး​ေနမွာပါ Ko Aungla အားတင္​ထားပါ if win or lost we are support you always and love you
Anna Dim ေဘဘိီးေလး Haokip7 วันที่ผ่านมา
Naymin Thuya7 วันที่ผ่านมา
ပြဲမၿပီေသးပါဘူး ေအာင္လဒီခါးပတ္ေတြျပန္ကိုရမွာၾကည့္ေန႔ ဘယ္ေတာ့မွငါတို႔မ႐ွံူးဘူးေဟ့
Moe Moe7 วันที่ผ่านมา
Phone Myat7 วันที่ผ่านมา
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၀၆-၂၀၂၁)
มุมมอง 853 559
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ - နေပြည်တော် ရဲ့ ထူးခြားချက် - BBC News မြန်မာ
မေလ ၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်း
မေလ ၆ ရက်၊ ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းများ
အောင်လအန်ဆန်ဟာ ONE ချန်ပီယံရှစ် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ရွှေခါးပတ်ကော စွန့်လွှတ်လိုက်ရ
UK Match Day Official Sports Channel
ลูกตาปิศาจ !! เยลลี่สุดหลอน...มีชีวิต - DING DONG DAD
มุมมอง 343 405
มุมมอง 1 540 285
เพื่อนซี้ผีจอมป่วน | เพื่อนซี้ vs แฟนหนุ่ม | ละครเพลงเรื่องปัญหาความสัมพันธ์โดย ลาลาไลฟ์
มุมมอง 147 987
มุมมอง 1 350 175
มุมมอง 291 460
มุมมอง 993 121
มุมมอง 860 284